Life Archives — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
upenyu upenyu upenyu upenyu upenyu upenyu upenyu upenyu upenyu upenyu upenyu upenyu upenyu upenyu
njanji 8: Beautiful Life 2 (Mine)
Oh, Ndinokuda, hongu
Kufanana hapana zvimwe, hongu
Pandinoona manyemwerera iwe chipenye kungofanana muzhizha, hongu
Munoziva kuti kunzwa kana mashoko vanotadza
Zvakaoma nokududza zvandiri Wanna kuudza
To Mini kwangu ini, murume wangu muduku
Kutaura hurukuro mwana, Handizivi zvauri kutaura
Asi zviri mimhanzi munzeve dzangu zvazvo
Boom bap kuti baba vako kana ndiri pedyo zvazvo
Amai akaisa imi mavari polos uye skinnies
Curly nokoko dzomusango, iwe uve flyer kupfuura Leer zvazvo
Une kuti yakavhenganiswa mbudzana swag pamusoro pavo
Achitarisa kufanana amai vako nababa vako pamusoro pavo
Straight panze mudumbu iwe kunoramba chaiyo
Ndakachema saka zvakaoma kusvikira Handina kuva misodzi vakasiya
Kubvira ipapo iwe chengeta kunyemwerera nechiso changu
Wrestling nokutamba, mhuka panzvimbo
Tarirai ndinoziva une zita rangu
Asi ndinoda kupfeka mupenyu wake mukurumbira, Ndinokuda
Kufanana hapana zvimwe
Pandinoona manyemwerera iwe chipenye kungofanana muzhizha
zvandakaratidzwa haagoni kuva zvakajeka kwete kwete kwete
Chikonzero uri wakanaka, hazvishamisi ndinokudai
Handigoni kutenda uri wangu, Handigoni kutenda uri wangu
Unogara mupfungwa dzangu, Handigoni kutenda uri zvangu zvose (2X)
Sei ndakaroorwa White Girl
Pose pandinonzwa kuposita mifananidzo mhuri yangu evanhu vezvenhau, mhinduro dziri mafaro nguva dzose. Zvinonyanyozivikanwa, "Mwanakomana wenyu Wakanaka!"Kana kuti" Chii mhuri chakanaka!"Asi mumwe mumwe nevakawanda mhinduro iri, "Ko mukadzi wako chena?"Vanhu vanondibvunza panguva anoratidza dzimwe nguva zvakare. Mhinduro ndeyokuti hungu. Mudzimai wangu kongiri pakati Hungarian, ChiItalian, uye Polish-izvo kuti vanhu vakawanda chaizvo zvinoreva hungu, iye ari chena. Izvi hachibatsiri vamwe, asi zvinotyisa kana kunyange mwoyo vamwe. Handifungi munhu anofanira kushamiswa kana mwoyo vendudzi michato, asi ini ndichiri kuda kutaura pamusoro nei ndakaroorwa kunze kwangu "rudzi.
Chisarudzo kuroora mumwe kubva dzinza akasiyana makuriro akanga asiri rokubvisa mumwe kwandiri. Handina kumbobvira akagara pasi uye akanyora akabudisa zvayakanakira nezvayakaipira nyora. Kunyange kana zvandakaita, Chokwadi chokuti mudzimai wangu haasati amboona chiitiko pamusoro "Martin" vaizova with muboka. asi chokwadi, Handina kutambura pamusoro payo kana kutsvaka zano pamusoro kana zvakanga OK. Ndaiva nechokwadi chokuti iye ndiye mukadzi kwandiri kuroorwa, kunyange zvazvo akanga asina vatema.
Vamwe aisazombofa funga kuroorazve mumwe akanga asiri chete urudzi sezvo…
Tinofanira Kutama On?
Ndakadzora kukwira pamwe Trayvon Martin the saga kubva pakutanga. Kufanana vazhinji venyu Ini akatarisa nhau, verenga nyaya, uye akataura nezvazvo neshamwari. It vakatonga pachena kukurukura uye kwakamutsa zvikuru vaida kukurukura munhangemutange America. The shata chaizvo rusaruraganda yakanga kusundwa pamberi zviso zvedu, uye avo vanoda kunyange kuedzesera zviri hakuwaniki dzakamanikidzwa nezvazvo.
Papera gore, Trayvon kuti muurayi kwave vakaedza uye kuwana mhosva. Zvinoreva here kuti tinofanira kupfuurira kubva nyaya? Vamuwana mhosva, saka izvi "rudzi nyaya” havafaniri kuva chaiye sezvo taifunga vakanga, rudyi? Rusingabviri kuva zvakare kubva pachokwadi. Handina chinangwa kuvabvunzeiko chokwadi, Trayvon unhu, kana mutongo uyu akashungurudzwa ezvinhu, asi ndinoita kufunga mokumbokurukura kuramba. Kutongwa iri pamusoro, asi kukurukurirana haana kuva.
Ndinoziva pane vakawanda vanonetseka nei chokuita nomuedzo uyu akabatwa pfungwa dzakawanda. Vamwe vanonetseka kuti nei vamwe vatema vabereki ndivo saka anokurumidza tsitsi Trayvon Martin, pasinei nokuti akanga nyaya yake. Shure kwezvose,…
Uri Kurarama Upenyu Hwakanaka?
Kwekutanga gore rino ndakaenda pamusoro rwavakaita pamwe mubhuku rangu idzva, The Life Good. mumwe usiku, Ndakapa hurukuro kuti akaedza kupindura mubvunzo, "Zvinorevei kurarama upenyu hwakanaka?” muChattanooga, TN, isu akanyora shoko uye ndava vaiswa payo. Bhuku rakabudiswa musi October 1, 2012 uye iwe unogona kutenga nayo pano. Kuti udzidze zvakawanda pamusoro bhuku unogona baya pano. Unogona kutenga The Good Life Album pano. Uri kurarama upenyu hwakanaka?
Chii Upenyu Hwakanaka?
Kana paine Genre mimhanzi nguva dzose kutaura pamusoro uye kudzingirira upenyu hwakanaka, zviri hudyu-hop. Ndinoda hudyu-hop. Ndakada hudyu-hop upenyu hwangu hwose. Pane chimwe chinhu pamusoro ngoma, uye nekudetemberwa, uye simba iri ini nguva dzose wakavhomorwa. Pandakanga ndichiri kuyaruka, pandaiva asiri mukirasi kana vakarara - kana vakarara mukirasi - I akanga achiteerera chandinonamatira rap. Ndaive vanonyatsoteerera shoko ravo ose, uye vakanga zvizhinji zvokutaura. Ndinoziva rap vakawanda havasi kuedza kuva vadzidzisi, asi izvozvo hazvirevi Handina kudzidza. Ini ndokunyatsoteerera pfungwa dzavo pamusoro upenyu hwakanaka - uye ndakafarira zvandakanzwa.
Ndaiva kufarira nziyo se "Mari Ko chinhu,"Uye ndakanga kuteerera Albums nemazita okuremekedza akadai sokuti" Ibva Rich kana Die Kuedza. "Saka zvechokwadi hazvishamisi kuti pfungwa yangu upenyu hwakanaka akanga ane chikwama saka makazara kuti handizvo kunyange pedyo. Yakanga isiri zvose nezvemari, Zvisinei. Ndakadzidza hedonism, zvepabonde, pfuma, irresponsibility, usimbe, zvinodhaka, uye kuwana kuremekedzwa - zvose sezvo zvidimbu kuti puzzle ndiye…
The Yemberi Trip Lee
Vakawanda munoziva ini somunhu rapper uye muiti, asi chokwadi chiri, mwoyo Ndagara muparidzi.
Nokuti chero Ndave kuita mumhanzi, gobvu chido changu chave kuzivisa Vhangeri uye kuzivisa kunaka uye kubwinya kwaJesu Kristu. Nenyasha dzaMwari randaifanira mukana kushandisa mimhanzi kuita kuti paruzhinji padariro. Ndava akada ose yechipiri uye Ndakaedza kuzviita neunyanzvi. Kwemakore, Ndava vaiona Mwari kunditi yokusimbisa ini kwete kuti mumhanzi, asiwo kuparidza uye kunyora.
Ndicho chikonzero gore rapera ndakanyora The Life Good, bhuku dives udzamu shoko shure kwangu rekodhi chimwe chete rokuti. Zviri Ndokusaka ndakazvizivisa wokupedzisira kuwa kuti ndingadai rirege vaifamba zvikuru sezvo zvikuru sezvo ndave. Ndinoda kudzidza kuva mufundisi akatendeka, uye kuti zvinogona chete zvechokwadi panotaurwa chechi yeko. Saka ndiri kutora nguva kushandisa pakudzidza kubva vafundisi okuzvipira vekusvondo vangu Washington, DC. Ishe vachitendera, sezvo ini kushumira patsvimbo kuchechi, Ndicha…
Mundoona shure paanoitwa pamwe Trip Lee sezvaakaita inokurukura ichava nenguva yakanaka neyakaoma vari mubishi rokuita Album ake okupedzisira “The Life Good.”
Chii My Book About?
Bhuku chinobuda October 1, asi iwe unogona kukopa mharidzo chitsauko panguva TheGoodLifeTheBook.com, uye unogona kwerubwinyo rwakagara rwuripo murayiro bhuku pano.
Ndakatarisa vakawanda political magungano izvi okupedzisira vhiki mbiri. Mukurukuri paruzhinji mandiri asingagoni kubatsira asi pamusoro-kuongorora mashoko uye unyanzvi kwakarungwa kwounyanzvi pakati musarudzo nevatsigiri vavo. munhu wese ari ichocho akaedza kunyengetedza kwauri pachako nyaya uye / kana zvipikirwa mikuru.
Ndichaenda bvuma, zvimwe zvishuwo zvavo vaiva vanokudzwa, asi vakawanda mashoko vainzwa akaverenga, chinhu, uye dzavasinei enyika- kwandiri kanenge. Vamwe ZVOKUTAURIRANA akanga Achinanga zvakaipa zvakare. Asi kukakavadzana platforms haisi pfungwa this post.
Chimwe chezvinhu Ndakaziva chaiva kuti apo mapato vakanga vachiedza kutengesa imi rwevamiriri vavo, vakanga vachiedza kutengesa imi worldviews dzavo. Maererano navo, zvinhu propserity ndiyo nyika yechipikirwa, uye nebato ravo anoda kuva Mosesi wako. Mukuona kwavo, upenyu hwakanaka ari kuwana pfuma kana ukashanda nesimba, uye musarudzo dzavo ndiye Muponesi anogona kutora imi ikoko.
Zvino hapana chivi pamusoro upfumi. Uye vari mubayiro basa nesimba chinhu chakanaka, asi kuti hazvigoni kuva apo tariro yedu nhema. Upfumi hakufaniri kuguma kwedu chinangwa, zvinofanira kuva nzira kuti magumo mukuru. Isuwo havagoni mari…
Sei Ndakanyora Book
Bhuku rinonzi zvabudiswa musi October 1, asi iwe unogona kwerubwinyo rwakagara rwuripo kuigadzira ikozvino pano.
The Lives Beautiful pamusoro Unborn
Rwendo Lee riri "Beautiful Life” kubva vachishuva Mwari pamusoro Vimeo.
rwiyo wandakatanga akanyora kwangu Album zvikuru ichangopfuura, “The Life Good” aiva rwiyo inonzi "Upenyu Hwakanaka.” Vachishuva Mwari akandibvunza pamusoro kuti rwiyo wangu mwoyo shure payo. Heunoi yavo Blog yose romukova.
Uye pano ndiwo acho kuti rwiyo, iyo ine V. Rose:
Kurarama Moving Kufema
Saka Regai Hope Simuka
Mwari aiziva zvaakanga achiita
hanzvadzi Dear, Ndinonzwa nzvimbo iwe panguva
Ndinoziva haina hapana nyore Kumbonetswa achipfuura kuti
Pane mwana mudumbu mako, asi iwe hauna kuedza kuita kuti
Ungave kutora shure zvose kana waiziva kuti, asi iwe hauna kuva chinotiudza kuti
Kuti nguva nemukomana wako, kuti kunonoka usiku
Kana wafunga akanga achiita rudo, kuti iwe aizoita upenyu
Zvino zviri kunzwa tsvete, murume haina kufanana
Hauna upenyu, fura, nguva chaizvo hazvina kunaka
Havagoni zvikuru kukuudzai kuti ndinonzwisisa marwadzo enyu
Asi ndinoziva haufaniri kunzwa mwoyo uye kunyara
Uye ndinoziva kuti mwana ari mudumbu haasi mutambo
Ane mwoyo urove, iye Kumbonetswa kukura…
Biblical MURUME CHAIYE uye Kukosha Vanoyemurika kubva vachishuva Mwari pamusoro Vimeo.
Shamwari dzangu pane vachishuva Mwari Akandibvunza mimwe mibvunzo pamusoro zvipingamupinyi kuva murume uye sei kugadzirisa dambudziko. Pano zvandakataura
The Good Life Bhuku
Sezvo vazhinji munoziva, Ndave ndichishanda pane bhuku kuenda pamwe Newest Album wangu, The Life Good. Eya bhuku rino vachange kwokusunungura pamwe Moody Vaparidzi musi October 1, 2012. Verenga zvakawanda nezvazvo pachaunga kusunungurwa pazasi. Uye endai TheGoodLifeTheBook.com kuti akaziviswa kana anobudiswa.
Hip Hop Artist rwendo LEE kusunungura DEBUT BOOK UPENYU AKANAKA ON OCTOBER 1, 2012 PACHISHANDISWA Moody VAPARIDZI
Upcoming chirongwa achivaka kuitika Album kusunungurwa uye redefines "The Good Upenyu" by kudenha vanhu muchiedza nhema vasingachagari asi watangawo itsva uye munokubwinya.
Los Angeles, Calif. (Chivabvu 17, 2012) -Billboard Chati-topping hip Artist Trip Lee ari gearing nokuda kwake debut bhuku kusunungurwa, The Life Good (Moody Yevaparidzi). A kuenderera kuti Album ake okupedzisira izvo musi April 10, 2012 kuburikidza Reach Records, The Life Good achaita depends zvitoro munyika musi October 1, 2012.
"Kwemakore, Ndave kuita mimhanzi nezvimhingaidzo yedu nyika maonero uye pfungwa kuna Kristu – asi kune vagara zvisingakwaniswi mimhanzi, nekuti hakuna chete zvokuti unogona kutaura pane rwiyo,"Anodaro Trip. "The…
Nekusangana Good Life Live
The Life Good rwavakaita kubanha kure vhiki rino! Ona iyo zuva achava pedyo nemi. Tichatevera kuva Minneapolis, Michigan, Virginia Beach, Nashville, Orlando, uye Dallas. More misi zvichapiwawo nokukurumidza uyewo! Tinya pa rinobatanidza nokuda matikiti kana kuenda ReachRecords.com/events.
The Life Good ari pano!
My chechina Solo Album, "Upenyu The Good” ave pamutemo yabudiswa! Tenga album kubva iTunes pano. Unogona kunhonga album kumusoro muzvitoro pana Lifeway, Christian Family, Mardel, uye Target & Wal-Mart (sarudzai zvitoro).
wo, unogona vhidhiyo inonzi hutsva "Ndiri Good” uine Lecrae pano. Isu partnered pamwe Voice rezvapupu pane uyu kurera ruzivo pamusoro kutambudzwa uye kukurudzira vatendi kumira takasimba.
ini utaurewo achinyengetera kuti dai Ishe kushandisa chirongwa ichi kupikisa uye kukurudzira vakawanda!
Ndiri Good Rakatsanangurwa
"Ndonzwa mushe” akanga imwe okupedzisira nziyo kunyorwa nokuda Album yangu itsva, The Life Good. Lecrae uye ini chaizvoizvo akanyora uye akanyora rwiyo yakasiyana zvachose, uye isu vakaifarira pakutanga. Asi pakupedzisira takasarudza zvakanga chete tsvarakadenga yakanaka; uye taida ariswededze chinhu chikuru. Saka Ndairidza munhu anorova mashoma kwaari kuti ndakanga ndisina mashoko akanyorwa nokuda asi, uye tose takanga murudo pamwe iyeyu. Zvaiva paakaita, va neukasha, uye catchy.
Ndakamuudza kuti ndaida kunyora rumbo kuti akakurukura kuchengeteka kwedu muna Kristu. Ndaida kukurudzira vaKristu kuti varege kurarama nekutya uye kutanga vaigara Romans 8. Takasarudza pamusoro "Ndiri Good” dingindira, takabvunza Ishe rubatsiro, uye takatanga achinyora wakatarisana makona Inosvika kwakaita Atlanta Studio. Isu akanyora dzakawanda vocals dzedu kuti usiku, uye kana hwose zvaitwa Taikada.
Tinovimba tsananguro iyi acho kuchatibatsira kugaya zvirimo ...
Ndinonzwa kuuya dambudziko kuti ini, rufu pasuo rangu nzira /
Kutya inoti I'ma kuparara BRO, asi hazvisi izvo Ishe wangu vanoti /
Register nokuti Man Up Conference pano uye kudzidza zvakawanda pamusoro Album wangu “The Life Good” pano
“The Life Good” anodzika April 10. tora “robhoti” vakasununguka pano
The Life Good
Nokuti yokutanga hafu 2011, Ini haana nziyo, hapana zvinhu, hapana anoratidza, hapana chinhu. Ndakatamira Washington DC akatora pamusoro 5 mwedzi kure nokuda internship choufundisi. Kunyange zvazvo ndakanga ndisina aifamba nyika uye akamira pamberi gungwa vanhu ose usiku, zvakanga mumwe mwaka hwangu zvibereko zvikuru. Kana internship dzakaguma Ndakatanga kufamba zvakare uye zvishoma nezvishoma ndakatanga kushanda pamimhanzi itsva. Around achawira Ini ndokupfura kupinda zvizere giya kushanda wangu rechina Solo Album. Uye pashure pemwedzi kushanda zvakaoma, album kwaitwa akanyatsorevesa.
Ini handigoni kunyange kutaura kufara ndiri kusunungura naro. Ndinogara kutarisa kupa vanhu chinhu handina kupiwa pamberi. Ini handidi remake ane Album ndakatoiverenga akaita. Ndinoda kukupa Album mutsva, nenziyo itsva, uye nzira itsva kupemberera chokwadi mamwechete.
mu 2006 pamusoro wangu Album rokutanga, Kana ivo Only Waiziva, Ndaida kuudza vanhu nezvaMwari ane mbiri ani Ndaida kuti vazive. mu 2008, "20/20″ akabuda ndaida kukurudzira vanhu kuti vaone Ishe chiono chaiko. 2 Papera makore, "Pakati Two…
One Life: Share It
Vanechitsama masvondo apfuura, Ndakataura panguva pazvivako Outreach National Conference pamusoro mutendi wose basa kundoparidza. chinyorwa My yakanga 2 Corinthians 5:18-21. Heinoi vhidhiyo kubva pachirongwa.
One Life | Share It – Trip Lee kubva kembasi Outreach pamusoro Vimeo.
Kana uchida, heunoi vhidhiyo kukurukura Panel Ndaiva chikamu uyewo. Kukurukurirana rakanga nezveushumiri kembasi, chechi yeko, Kutumwa Kukuru, etc.:
vafundisi Panel kubva kembasi Outreach pamusoro Vimeo.
Plus, Ini vanokurudzira iwe tarisa vamwe vezvenhau vose kubva musangano. Paiva matani dzidziso huru kuti ndinofunga uchawana kuti musimbiswe.